IJamani kwikhosi yeTitanic: ihlala ichanekile kwaye ihlala iphosakele
AmaNazi ngokuchasene nentando
Soloko ulungile kwaye uhlala ephosakele
Ngubani ophumelele unyulo?
Into aba bantu babaluleke ngayo ngokufanayo kukuncamathela kwabo, ukuntsonkotha kwabo kunye nokusilela kwabo kwemigaqo. Akukho namnye kubo owakha wanobuganga bokuphikisana nomgaqo-nkqubo kaMerkel kwimeko nje enye.
ye UAlexander Brandenburg, ngaphambili Iiveki ze-3 Iiveki ze-3
Impambano yokugonya iyabambelela abantwana
Isicwangciso sokugonya esilandelwa ngurhulumente kubantwana nakwishumi elivisayo kunye nokuxhasa abazali yinxalenye yemizamo yasekhohlo yokuphelisa usapho kwimisebenzi yayo yangaphambili kunye nomsebenzi kunye nokukhathalela abantwana ezandleni zabazali (umtshato yonke / Inkqubo yesini / umgaqo-nkqubo wabambalwa).
ye UAlexander Brandenburg, ngaphambili Iinyanga ze-2 Iinyanga ze-2
Musa ukoyikiswa. Ubonisa ukomelela, ukuthembeka kunye nokuzimisela. Niza kuqokelelana kwiindawo enihlala kuzo, nenze izicwangciso zokuncedana, nixhase uxanduva lokuphendula ngezenzululwazi nenkululeko yokuthetha eziyimfuneko ukuze uluntu luphumelele.
Ubomi bemihla ngemihla buyizisa ekukhanyeni: abalawuli banamavolontiya. Akusoloko kufuneka kube ngamapolisa angenelela ngesibindi. Kudala ibizwa ngokuba yiBlockwart!
ye UAlexander Brandenburg, ngaphambili Iinyanga ze-3 Iinyanga ze-2
Isiseko seDesiderius Erasmus
Asiyiyo i-AfD, kodwa kunjalo sisondele kuyo ngenxa yokukholelwa. Kwaye njengeqela elingelilo, ndiyayixhasa esidlangalaleni into yokuba ndivotela i-AfD, kuba ime kwaye isebenza ngokusekwe kuMthetho osisiseko. Ngaphandle koko ngekhe ndibavotele kwaye ndingasentloko kwesi siseko. I-AfD imangalela amanyathelo akhoyo okhuseleko lomgaqo-siseko ngesizathu esivakalayo. Indlela kuvavanywa ngayo ngobungcali, urhulumente wobumbano uya kunikezela emva kweminyaka yeenkqubo. Kwaye kulungile!
ye UAlexander Brandenburg, ngaphambili Iinyanga ze-3 Iinyanga ze-3
Icandelo kunye nobumbano eJamani
Ngaba abantu bathe cwaka? Kubonakala ngathi akukho nkcaso inamandla kulo mgaqo-nkqubo ungenakuthethwa. Kodwa kuphela ukuba uyakholelwa, njengabalawuli abakhulu nabancinci, ukuba zonke izimvo ezinokuqikelelwa kufuneka ziyinyani ebomini babo, ziya kucinga njalo. Kukho izinto ezenzeka phantsi komhlaba kuluntu ezimfutshane, kodwa ubukhulu bexesha elide. Utshintsho olukhulu ludinga ixesha elide lokukhula.
ye UAlexander Brandenburg, ngaphambili Iinyanga ze-3 Iiveki ze-3
Abafazi kwimidlalo yamadoda nakwabanye
Iya kuba bubudenge ukuthatha into eyenzakeleyo ekungeneni kwabasetyhini kwi-domain yindoda-ngakumbi ngexesha lobuntshatsheli baseYurophu. Hayi - yiprojekthi yezopolitiko yokuvuselela imfundo. Kuya kufuneka siyiqhele into yokuba abantu basetyhini ngamadoda kwaye amadoda angabafazi. Yonke into inokwenzeka kwaye akukho sini sichaziweyo. Nokuba isini sinokwenza yonke into ilungile okanye imbi njengaleyo.
ye UAlexander Brandenburg, ngaphambili Iinyanga ze-3 Iiveki ze-4
Iphedi yesali ye-GDR iyayiphelisa idemokhrasi ye-GG
Amaqela amanyeneyo eMerkel akazi zimo, akukho siqalo, akukho siseko kwaye akukho sitokhwe sidinga ukugcinwa sikhuselekile. Kuphela ziinjongo ezilungileyo, iminqweno namaphupha alatha indlela eya kwikamva elinomtsalane elihambelana nabo bonke abantu kunye neentlanga kunye nezinto eziyinyani zendalo kunye nezebhayoloji. Kwakhona, i-utopia ibhiyozela ukuvuswa kwayo okutsha emanxiweni kwaye nabani na oyiphikisayo uyatshona ngokuvakalayo kwi-orcus.
Luluphi olu tshintsho sithetha ngalo?
Imozulu eJamani iya isiba mandundu ngokuya isiba mandundu. Ayisiyiyo nje imo yezulu ebizwa ngokuba yeyomntu eyenziwe evusa umdla omkhulu kunye nomsebenzi. Kodwa imeko yezentlalo enziwe ngabantu. Ukuphinda-phinda kweWurzburg kusikhumbuze kwakhona ngemozulu yelizwe.
ye UAlexander Brandenburg, ngaphambili Iinyanga ze-4 Iinyanga ze-3
Ukuhlanya ngokuchasene nesiqhelo: 10-0
Konke malunga nokusetyenziswa kwebhola ekhatywayo njengesixhobo esingummangaliso kuluntu olunamaphupha ehlabathi ngaphandle kwemiphetho erhabaxa, kodwa kukuqhuba ngombane kunye nesini- kunye nokutshintsha kwemozulu kunye nokuhluka okumbalwa kwaye "kugcwele ukutya".
ye UAlexander Brandenburg, ngaphambili Iinyanga ze-4 Iiveki ze-4
Qaphela: Uguqulelo lweli phepha luzenzekelayo kwaye lunokubangela iimpazamo ezincinci kwisemantics okanye iicolququial expression.
Abantwana kunye nosapho
le kunye nale
© Copyright 2019 | Ijamani kwikhosi yeTitanic